Myanmar Defence Weapons: မြန်မာတပ်မတော်လေ အမ်အိုင်-၃၅ပီ
မြန်မာတပ်မတော်လေ အမ်အိုင်-၃၅ပီ အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကာဖျက်ဗုံးတွေ၊ဒုံးတွေကို ပင်မလက်နက်အဖြစ် တပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
mg March 5, 2011 at 7:02 AM
မြန်မာ့တပ်မတော်လေတပ်စွမ်းအားကို များများမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း ဘင်္ဂလားကို မမှီသေးဘူးလေ။ဘင်္ဂလားနဲ့တော့ တန်းတူဖြစ်နိုင်တယ်။ထိုင်းကိုတော့ အမှီလိုက်ဖို့လိုသေးတယ်။ထိုင်းမှာက F-16 က အစီး ၆၀ လောက်ရှိနေတာ။ထိုင်းလေတပ်က ဒါနဲ့လုပ်စားနေတာ။အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဖြစ်ရင် F-16 ကိုပဲသုံးတာ အမြဲတွေ့ရမှာပါ။
ဒီခေတ်မှာ ကြည်းတပ်ကို သိပ်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ပါဘူး။အမြောက်တွေ သံချပ်ကာတွေ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း လေတပ်စွမ်းအားကို မယှဉ်နိုင်ရင် ရှုံးတာပါပဲ။ဥပမာ အီရတ် အမေရိကန်စစ်ပွဲကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။အီရတ်က ဟောင်ဝစ်စာတွေက အမေရိကန်လေတပ်ရဲ့အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်ခဲ့ရပြီး အီရတ်နိုင်ငံကျဆုံးခဲ့ရတယ်။ထိုင်း မြန်မာဖြစ်စဉ် ၂၀၀၂ တုန်းကလည်း မြင်မှာပါ။ကိုယ့်နိုင်ငံက လေတပ်ခေတ်မမှီတော့ တောက်ခေါက်ရုံကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒါကြောင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံး ခေတ်မှီဖို့ ကြည်း ရေ လေ ဘက်စုံ အားလုံးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရအုံးမှာပါ။
MM March 5, 2011 at 9:11 AM
မြန်မာတပ်မတော်လေဟာ ထိုင်းလေတပ်နှင့်ယှဉ်ရရင် လိုက်မမှီတာမှန်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လည်း နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ခေတ်မီလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေ တည်ဆောက်နေရတာပါ။အီရတ်စစ်ပွဲတွေမှာ အီရတ်တွေက ခေတ်မီလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေ မရှိခဲ့လို့လည်းပါပါတယ်။Pechora 2M SAMတွေဟာ ကိုဆိုဗိုအရေးခင်းမှာ အမေရိကန်ရဲ့ကိုယ်ပျောက်တိုင်လေယာဉ်ကို ပစ်ချခဲ့တဲ့ ဒုံးတွေကို အဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့စနစ်ပါ။ထိုင်းလေတပ်မှာ F-16တွေရှိပင်မဲ့ မြန်မာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Kyaw March 5, 2011 at 11:48 PM
This is good. I read on the internet that Myanmar have taken delivery ofamixture of 10 Mig-29 B,6Mig-29 SEs and4trainers.
It would be nice if Myanmar can upgrade all the B models to SE as the new radars and computer software will allow Myanmar to equip modern AA-12/R77 medium range air to air missiles which will enable us to compete with Thai AIM-120 missiles.
I read on the internet that modern air warfare is all about Beyond Visual Range (BVR) now so if we have some of that capability, we will do better against our neighbours in the future.
sai March 7, 2011 at 6:38 AM
ကျွန်တော်တို. ရဲ. နောက်ဆုံးပေါ် Mig တွေက ထိုင်းတွေရဲ. F 16 A /B အမျိုးအစားထက်သာပါတယ်..ဘာလို.လဲဆိုတော. F16 A/B တွေက HMS system တွေမပါလို.ပါ..နောက်ပြီး Dog fight ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို.ရဲ. Mig တွေက သူတို.ရဲ. F15 Eagle တွေထက်သာပါတယ်..ဒါပေမယ်. ကျွန်တော်တို.ရဲ. လေယဉ်အင်အားက တော.သူတို.ထက်နည်းပါတယ်။ အများကြီးပြတ်ကျန်ခဲ.တာကတော.ကျွန်တော်တို.ရဲ.ရေတပ်ပါ...ဒါလည်းသိပ်မကြာပါဘူး ဘာလို.လဲဆိုတော.ကျွန်တော်တို.က ကိုယ်ဘာသာကို frigate တွေထုတ်နိုင်နေလို.ပါ ကျွန်တော်တို.ရဲ.ရေတပ်ဟာအရှေ.တောင်အာရှရဲ.တစ်ခုတည်းသော frigate ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ.ရေတပ်မတော်ပါ..............
mg March 7, 2011 at 7:11 AM
ရေတပ်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အထဲမှာ သူလည်း ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ပင်လယ်ပြင်စိုးမိုးရေးတွေမှာ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ပြီး ပါဝါပြ ဟိတ်ဟန်ပြပြီး ခြိမ်းခြောက်လေ့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုကို ခြိမ်းခြောက်ချင်ရင် အဲဒီလေယာဉ်တင်သဘောင်္ကိုပြပြီး ချည်းကပ်ခြိမ်းခြောက်တာ အမြဲတွေ့ရမှာပါ။မြန်မာတပ်မတော်ရေလည်း ခေတ်မှီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဘင်္ဂလားမှာ အမေရိကန်က ရေတပ်အကူညီပေးပြီး စစ်ရေးအမြဲလေ့ကျင်သလိုလိုနဲ့ အမှန်က မြန်မာကိုခြိမ်းခြောက်နေတာပါ။ဒါကြောင့် ရေတပ်စွမ်းအားမြှင့်ရမယ်။ဘင်္ဂလားနဲ့ယှဉ်ဖို့ဆိုရင် ရေတပ်စွမ်းအားမြှင့်ဖို့လိုသလို ထိုင်းနဲ့ယှဉ်မယ်ဆို၇င်လည်း လေတပ်စွမ်းအားမြှင့်ဖို့လိုပါတယ်။ထိုင်းမှာကလည်း အမေရိကန်လေတပ်ရှိနေတာကိုး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်း လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေလည်း တည်ဆောက်နိုင်မှ တော်ကာကြမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ရေပြင်ပိုင်နက်လည်းကျယ်လေတော့ လိုအပ်တာအမှန်ပါ။သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် ကာကွယ်ေ၇းမှာ ဘက်စုံစွမ်းရည်မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်တာအမှန်ပါပဲ။
ဖြစ်စေချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြိုးစားကြရမှာပေါ့ဗျာ။
Kyaw March 7, 2011 at 11:23 AM
I don't haveaMyanmar font on my computer so I had to type in English. My apologies for that.
I think our Mig-29 SEs can match Thai F-16s (not Mig-29 Bs). I still think Thailand's Swedish made JAS-39 Gripen aircraft got the edge as it is very modern. That is where our air defence will have to come to play their role.
We do need to upgrade our Navy. Like Ko Mg said, we will have to take our time and do it step by step. That is the best way.
I would like us to build/buy modern frigates. Not buying second hand or out of date equipment from China or North Korea as that will not help our country at all. It would be nice to see something like the Russian Gepard class frigate to give us that advantage.
Myanmar is our country. I am proud to beaMyanmar and I want us to be powerful just to shut our neighbours up. If we are strong without relying on anybody, no one will mess with us.
kong March 8, 2011 at 7:44 AM
ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ရေမှာ frigates တွေ corvettes တွေများများထုတ်နိင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FAC တွေဟာ Tonnage နဲလွန်း low freeboard ဖြစ်လွန်းတာကြောင့် in bad weather မှာ operation မလုပ်နိင်ပါဘူး။ တပ်မတော်ရေကသင်္ဘောတွေမှာ air defence missile system မရှိပါဘူး air defenceအတွက် AA guns တွေဘဲတပ်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ မဟာအမှားပါ။ ယခုခေတ်မှာ fighters တွေကို AA guns နဲ့ပြစ်ချဖို့၈၀% မလွယ်ကူပါဘူး။ AA guns တွေဟာ very short range effect ဘဲရှိပါတယ်။ကိုယ်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာ fighters တွေကကိုယ့်သင်္ဘောကို air to sea missiles တွေနဲ့ပြစ်ပြီးလောက်ပါပြီ။ ကဲအသုံးမကျတဲ့ဒီ AA guns တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတပ်မတော်ရေရယ်။......